သူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on May 21, 2013 in Creative Writing | 31 comments
တစ်နေ့သ၌ “သွားရေကျ” မည်သော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး၏ လွန်စွာ ချောင်ကျသော စားပွဲဝိုင်း တစ်ခုတွင် ဆိုင်နံရံအား ကျောမှီလျက် (၂၀) တန် ဆေးပေါ့လိပ်အား ဇိမ်ခံ ဖွာရှိုက်လျက် ရှိသော အသက်အားဖြင့် (၃၀) ဝန်းကျင်ရှိ လူရွယ်တစ်ဦးအား တွေ့ရလေ၏။ ထိုလူရွယ်သည် ခြေကလိန်ချိတ် ထိုင်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ မျက်လုံးများကိုလည်း မှေးစင်းထားကာ တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာအား လေးနက်စွာ တွေးတောနေလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရလေ၏။
များမကြာမီ အချိန်တွင် လွန်စွာမှ အသားမည်းနက်လှသော လူတစ်ဦးသည် အဆိုပါ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ လာပြန်လေ၏။ ထိုလူသည် လူရွယ်ထိုင်နေလျက်ရှိသော စားပွဲဝိုင်းသို့ သွားရောက်ကာ ထိုင်လေ၏။ ပြီးနောက် စားပွဲပေါ်တွင် လူရွယ်တင်ထားဟန်ရှိသော (၂၀) တန် ဆေးပေါ့လိပ်အား ကောက်ယူကာ မီးညှိ ရှိုက်ဖွာနေတော့၏။
အသားမည်းနက်သော လူ ဝင်ရောက်လာပြီး မကြာမီ အချိန်တွင် လွန်စွာမှ အပိုးမကျိုးလှသော မျက်နှာပေး၊ ဆောင့်ကြွားကြွား အမူအယာရှိသော လူတစ်ဦးသည်လည်း ထပ်မံ၍ ဝင်ရောက်လာကာ လူရွယ်ရှိသော ဝိုင်းသို့ပင် သွားရောက် ထိုင်ပြန်လေ၏။ ပြီးနောက် (၂၀) တန် ဆေးပေါ့လိပ်အား ကောက်ယူ ဖွာရှိုက်ပြန်လေသည်။ လူရွယ်မူကား ၎င်းတို့နှစ်ဦး ရောက်ရှိလာခြင်းကိုပင် သိပုံ မရပါပေ။ ၎င်း၏ အတွေး၌သာ နစ်မြောနေဟန် ရှိလေ၏။
နောက်ထပ် တစ်အောင့်လောကမျှ အကြာတွင်မူ လွန်စွာမှ အရပ်ပုလှသော လူတစ်ဦးနှင့် လွန်စွာမှ အရပ်ရှည်လှသော လူတစ်ဦးတို့သည် တူယှဉ်တွဲလျက် ဝင်ရောက် လာပြန်လေ၏။ ထိုဆန့်ကျင်ဘက် လူနှစ်ဦးသည်လည်း လူရွယ်ရှိရာ လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းသို့ပင် သွားရောက်ပြန်လေ၏။ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးသည်လည်း ရှေ့လူများ နည်းတူ စာပွဲပေါ်မှ လက်ကျန် (၂၀) တန် ဆေးပေါ့လိပ်အား ကောက်ယူကာ ဖွာရှိုက်ပြန်လေ၏။
ထိုအခိုက်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် စားပွဲထိုးလေးမှ “ဘာသောက်မလဲ ဆရာတို့” ဟူ၍ လာရောက် မေးမြန်းလေရာ ရောက်လာသူ အသီးသီးမှာ ၎င်းတို့၏ ဦးခေါင်းများအား ညင်သာစွာ ယမ်းပြလိုက်လေ၏။ ၎င်းတို့သည် ယင်းသို့ တစ်ဝိုင်းထဲ ထိုင်နေကြခြင်းပင် ဖြစ်သော်လည်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စကား တစ်ခွန်းမျှ ပြောခြင်း မရှိပေ။
သို့ရာတွင် များမကြာမီ အချိန်တွင်မူ စဉ်းစားခန်း ဝင်နေသော လူရွယ်၏ မျက်နှာသည် တစ်စုံတစ်ရာအား အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ပြီးသူ၏ မျက်နှာပေးကဲ့သို့ ဝင်းပလာပြီးလျှင် ၎င်း၏ မှေးစက်ထားသော မျက်လုံးအစုံကို ဖွင့်လိုက်လေ၏။ ဖင်ဆီစံအထိ လောင်ကျွမ်းနေပြီ ဖြစ်သော ဆေးပေါ့လိပ်တို အားလည်း ဆေးလိပ် ပြာခွက်အတွင်းသို့ ထိုးချေလိုက်လေ၏။ ပြီးနောက် ၎င်း၏ ဝိုင်းတွင် ထိုင်လျက်ရှိနေသော လူလေးယောက်၏ မျက်နှာများအား တစ်ယောက်ချင်း စေ့စေ့ ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် ဤသို့ စကားဆိုလေသည်။
“ဒီနေ့ည သန်းခေါင်အချိန်မှာ သူကြီးဦးခိုင် အိမ်ကို ဖောက်မယ်”
၂ လုံး ၃ လုံးနဲ့ ကုန်နေတာ ဒင်းတို့မသိဘူးထင်တယ်
ဘိုးဘိုးမျိုး ကို ကျုပ်က
ကျေးဇူး အားဂျီး အများဂျီး တင်ရှိဘာဂျောင်း ….။
စကားမစပ် လက်ထောက်ချရရင်ဖြင့် သဂျီးဆီမှာ
မျက်နှာပွင့် ပီယဆေး ဖော်တဲ့ စာအုပ်ဆိုလား ကျမ်းဆိုလား ..
အဲ့ဒါပါ တခါတည်း မ-မယ်ဗျာ..
ဒီစာအုပ်တွေလည်း မ,မယ် …။
သမီးဒေါ်ဂလေး လည်း မ,မယ် ….။
ရှိသမျှ အကုန် မ,မယ် …. ((သမီးဒေါ်မှလွဲ၍ ကျန်ဒဲ့လူ မပါ))
ခြေကလိန်ချိတ် ထိုင်နေတဲ့ အသက်30 အရွယ်က …. ကိုခြောက်ညက်နှာ…
နောက်ထပ်ရောက်လာဒါက .. အူးချောကလက်ရီး ..
အပိုးမကျိုးဒဲ့ ညက်နှာနဲ့က … ဖွတ်တီးကတ် ..
နောက်ဆုံး ၀င်လာတဲ့ … it အတွဲကတော့ … မိတိုက်နဲ့ … တိုတိုမတ် …. ။
သွားရည်ကျမှာ ထိုင်ဘီး … သဂျီးအိမ်ကို သွားရည်ကျနေဒဲ့ …. အိုက်လူဒွေကို ထိပ်တုံးခတ်ပါဗျို့ …. ။
(သဂျီးကို .. ဂလိုပေါင်းပါတယ်နော် … တူ့နာမည်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးပျောက်ပြီး သူကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ …. အစပြန်ဖော်ပေးပါအိ .. ခွိခွိ … )
မန်းဂဇက်ကို ရွာလို့စခေါ်တာရော.. ကျုပ်ကိုသူကြီးလို့ခေါ်တာရောကိုပါ…
မန်းဂဇက်စထောင်တာ.. ၂၀၀၆ ဆိုတာ.. မမေ့စေချင်…
ကျုပ်မြန်မာပြည်ရဲ့အင်တာနက်နဲ့..ချိပ်ဆက်ပြီး.. yadanar.com Forum ထောင်ခဲ့တာလည်း.. ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကဆိုတာ.. သိစေချင်… :harr:
အွမ်မ် .. ဟုတ်ရို့ယား … ဂယ်ဘဲယား … ။ :bar: အရင်ကရေးဒဲ့ လူတလုံးတို့ ၊ PareByokeတို့ …. အိုက်လို ခေါ်ဒါ တထှာမှ ဂျားဖူးဘူး/မညင်ဖူးရို့ … ။ (ကိုယ်ပဲ မမှီလိုက်ဒါယားမတိ … အသုံးပဲ မတွင်ကျယ်ခဲ့တာလား မတိ … ) … ။၀င်ဝင်ချင်းကတော့ Kai ဆိုတာ admin လို့ပဲ … တိထားတာရယ် .. ။ ရွာလို့ သုံးနှုန်းလာဒယ်ချိုဒါကယဲ … အရုပ်ကလေးတွေ သုံးဘီး ပို့စ်တပုဒ်ရေးခဲ့တာက စခဲ့တာလားရယ်လို့ … ။
လောင်းလောင်း အဂိုးက သဂျီးစဖြစ်တာရယ် ၊ ရွာစဖြစ်တာရယ် .. ဂယ်ရီးချိုယင်.. ချောတီးပါချင့် ….
သများ စသိတဲ့ သဂျီး အခေါ်ကတော့ …. ဘွပု စာလုံးပေါင်းဘီး .. ရွာတော်ရှင်ဆူး အဓိပ္ပါဖွင့်တဲ့ဟာပါပဲ … ။ ခိခိ …
အဲဒီ yadanar.com ကို ၂၀၀၀နှစ်မှာ ဖွင့်ဖို့ နာမည်ဝယ်ဖို့ လုပ်တာ လူဦး နေပြီတဲ့။
အဲဒါ သူကြီး ကိုး။
နဲနဲ ဘဲ စောပြီး ဦးသွားတာ။
သဂျီးအိမ်မှာ ဘာရှိလို့ ဖောက်မှာလဲဟင်
တော်ကြာ အဖေါက်မတော်လို ပြေးပေါက်မှားနေမယ်နော်။
အမေဒစ်ကားမှာဒေါ့ ပိုင်ဆိုင်ဒါဒွေအိမ်မှာထားဘူးဆိုဘဲ။ ဘဏ်မှာအပ်တယ်ကြားဖူးတယ်။ ဒဂျီးအိမ်ဖောက် နဲ့အေ။ ဘဏ်က ဒဂျီးနာမည်နဲ့လော်ဘီတွားဖောက်။
အဲ့ဒီ စာစု ထဲမှာ “သာ” တလုံး ထည့်ပေးလိုက်မယ်။
အဲ့ဒါ ဆိုရင် ဘာ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သွားမလဲ..
အဟက် ဟက် အိုက်ဂလိုသာဆိုရင်ဒေါ့ အံဂျာဒုန်း တို့
စားချင်တာတွေ ပျော့စ်နေဘီလို့ မှတ်ရမှာပေါ့ အမဆူးရဲ့….ေိေိ
ဂတ်တူဆိုယီးက သူဖောက်ချင်တာ သူပြောဒယ်…
ဟော မမပျာကတော့ ..ဖောက်ပြီးတဲ့အပြင် စားဖို့တောင် ပြောနေဘီ…
ကျုပ်ကတော့ ဟိုကျမ်းဘဲ စိတ်ဝင်ဇားဒယ်…
ခုတောင် အိမ်မြောင်အမြီး၂ခွ လိုက်ဖမ်းနေဒါ…
အိမ်မြှောင် အမြီး ၂ခွ များ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးလို့ ရတယ်.. အမြီးပြတ်တဲ့ အိမ်မြှောင် ကို အမြီး ပြတ်နေရာကို သွားကြားထိုးတံ ၁ချောင်းခံပြီး ပတ်တီးစီးပေးထားလိုက်.. ပြန်ထွက်လာရင် ၂ခွ ဖြစ်ပြီး ထွက်လာ လိမ့်မယ်။
မိတ်အင် ဂီဂီ ဆိုပြီး စီးပွားဖြစ်တောင် ရောင်းစားလို့ ရသေးတယ်။
မားကတ်တင်း အဆင်းကောင်းရင် ဒေါ်လှ သန်းချီ ပိုက်မိနိုင်တဲ့ ကိန်း
စကားမစပ် ဒေါ်အီတုန်း ခနခနညွှန်းတဲ့ သဂျီး ရွာတော်ရှင် ပိုစ့် ဘယ်လိုပျံရှာရမတုန်းးးးဟင်င်င်
အရင်တုန်းက ရဖူးတယ် …
ပြီးတော့ နေလှမ်းတယ် …
ခြောက်လည်း ခြောက်ရော …
ပျောက်သွားတာ ရှာကို မတွေ့တော့ဘူး ….
တစ်လောကတောင် တွေ့လိုက်မိသေးတယ် …
အမြီးက နည်းနည်းလေးပဲ ခွနေတာ …
များများခွမှ စွမ်းတာ ဆိုပဲဗျ ….
ဘယ်လို ဖော်စပ်ရမှန်းလည်း မသိပါဘူး …
သူများတွေက စွမ်းတယ် စွမ်းတယ် ပြောသံကြားလို့သာ ဟိုတစ်ခါက ကစ်ထည့်လိုက်တာ …
ဘ၀တူ တွေလာတွေ့သကိုး ကျော်လည်း ရဖူးပီး နေလှမ်းတာ ပျောက်သွားဖူးကြောင်းးး
ဂနေ့ည ပီယဆေးစာအုပ်တော့ အပါဖောက်ပေတော့ဗျို့ ..အဲ့ထဲ နည်းပါကောင်းရဲ့…။
အဲဒါပြောဒါပေါ့ လူကြီးမိဘတွေ ပြောပြောနေတာ..
အခုတော့ အပေါင်းအသင်းမှားတော့……. ကိုယ့်ဟာကို အရပ်ကလေးပု နေပါတယ်..
သဂျီးအိမ်ဖောက်ရင်တော့ သူကဘောစိ ဆိုတော့ သူဆီမှာ ရွှေအုတော့ ရှိမှာသေချာတယ်………..ဟိဟိဟိ
နောက်ပြီးတော့ ငါတို့စတွေ့တုန်းက သူခိုးပုပုလေးနဲ့ သူခိုးမဲမဲလေး နှစ်ကောင်ရှိတာမှတ်မိသေးလား…
ပြောလိုက်စမ်းဘာ ဟို လူဂျီးကို … (အဲ့ အဖွဲ့ထဲ ပါခဲ့ရင်)
ဝရမ်းပြေးခဲ့ ရင် ဒီ ဘက်ကို ပြေးခဲ့လို့…..
သူက ခိုးရာပါလက်ခံမှာလား သူခိုးကို လက်ခံမှာလား… ရှင်းအောင်ပြောဘာ…
ရှင်းအောင်မပြောချင်လို့ ဂလိုပဲ မရှင်းမရှင်းပြောထားတာကို လာမရှင်းခိုင်းပါနဲ့။
အံဇာဂျီး တဂယ်လို့ သဂျီးအိမ်သာ ဖောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် :） cd2 SUEE
သူ့အိမ်မှာ ပီယဆေးဆိုပီး ပုလင်းထဲ ထည့်စိမ်ထားတဲ့ ကြံ့ဖိုက်တင်းဘောရယ် ….
အန္တရယ်ကင်းဘေးရှင်း အဆောင် ရေမြင်းဖင်ဆီဗူးလက်စွပ်ရယ် 。。。。
စီးပွားတက်စေဖို့ န၀ရတ်ကိုးသွယ်ရံထားတဲ့ ဆင်ဂွေးဇိလက်စွပ်ရယ် ……
ကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့ နှံကောင်ခြေသလုံး တုတ်ကောက်ရယ် ……
နာနာဘာဝကင်းရှင်းအဆောင် ဒိုင်နိူဆော ဒူးဂေါင်းလည်ဆွဲ …..
အဲ့တာတွေ အကုန်မခဲ့ပါ ….
ပီယဆေးပုလင်းကတော့ စာကြည့်စားပွဲ အနောက်ဘက် လျှို့ဝှက်လမ်းကနေ ၀င်သွားပီး ညာဘက်ချိုးရင် မီးဖိုချောင် ဘယ်ဘက် ကြောင်အိမ်ပေါ်က အရက်ပုလင်းတွေကြားမှာ 。。
ကျန်တာတွေကတော့ သဂျီး ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားကြောင်း ….. :harr:
“အောင်ကြူး အောင်ကြူး အမြာလန် ကုန်းအူ ဘော်တိုးဂျီး အရတ်သင် သမောတီး နူရင်” ဆိုတဲ့ ဂါထာရွတ်ပါလေ 。。。。。
အဲဒီ လော့ ကျလိကျလိက မိုးမလုံတဲ့ အိမ်ကလေးမှာ ဘာဒွေများရှိမလဲမသိဘူးနော်
ဘာပဲဖောက်ဖောက် ရတာ တစ်ဝက်ပေးရမယ် ဒါဗျဲ
ပို့စ်တင်ပီး ဖောက်တဲ့ သူတွေ … အံ့ပါရဲ့.. ထွမ်စပါရန်စီများလားဟင်င်..
အတော်ပဲဗျာ ကျုပ်ကလည်း အတော်မေ့တတ်ကလား ရယ်နဲ့။
ဒီတစ်ခါ အိန်သော့မေ့နေတဲ့ အခါ ဒီလူဆိုး၊ သူခိုး၊ဒပြ အဖွဲ့ကိုခေါ်ပီး တံခါးဖောက်ခိုင်းရမယ်
တော်သေးကွာ…လူဇိုးအဖွဲ့ထဲ အီးတုံးက မထည့်လိုက်လို့..
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်က နာ့ဘော်ဘော် ရဲဘော်ဘလက်တစ်ယောက်တော့
အဲနေ့က “သွားရေကျ” မည်သော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကို လာခဲ့ဖို့
ဘာမှမပူနဲ့ ရွာထဲက မီးသတ်ဘိုကြီး ကိုခင်ခ ကားပေါ်ရောက်နေပြီ သူရောက်လာရင် အူးခိုင်အိမ်ဖောက်မဲ့ ကောင်ဒွေကို ကင်းပုန်ဝပ်ပြီး စောင့်ဖမ်းလိမ့်မယ်